The Rohingya News Bank : အီးယူ
Showing posts with label အီးယူ. Show all posts
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအထူး ကိုယ်စားလှယ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
မြန်မာ-အီးယူအကြား ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးဆွေးနွေး
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ ယခင် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဥရောပသမဂ္ဂ၏ လူ့အခွင့် အရေး ဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် မြ. နamသည Gငူာသမန အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲတွင်နိုင်ငံခြားရေး ဝန် ကြီး ဌာန ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
Labels: 2019, mm, မြန်မာ့အလင်း, သတင်း, အီးယူ, ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်